Akụkọ - 126th Canton Fair
On Oct 15, dị ka otu n'ime ihe ndị kasị mkpa ahịa nkwalite nyiwe maka Chinese ụlọ ọrụ iji mụbaa ahịa ụwa, Canton Fair na Guangzhou lekwasịrị anya pụta ìhè ọhụrụ chụpụrụ, na "nọọrọ onwe ha ika" ghọrọ a elu-ugboro ole okwu nke Canton Fair.
Xu Bing, onye na-ekwuchitere Canton Fair na osote onye isi nke Foreignlọ Ọrụ Azụmaahịa China, kwuru na gburugburu ebe obibi na nke ndị mba ọzọ chere ihu na mmepe mba ofesi China na afọ a siri ike na ejighị n'aka. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ngosi gosipụtara ngwa ngwa mma na ihe ọhụrụ, ma nọgide na-eme mgbalị na nyocha na teknụzụ, mmepụta ihe, mmepụta ihe, wdg, na teknụzụ dị elu, ogo dị elu, uru bara uru na ngwaahịa ndị nwere onwe ha.
A na-anabata ọtụtụ ngwaahịa R & D na-enweghị onwe ha site na ahịa. N'otu oge ahụ, ndị na-azụ ihe na-adịchaghị mfe ịma ọnụ ma na-etinyekwu uche na teknụzụ, akara, ogo na ọrụ nke ngwaahịa.
N'ime ihe ngosi a, ngwaahịa ndị sorotec dọtara ọtụtụ ndị ahịa ma toro ha ebe niile. Karịsịa Revo II. Revo II bụ ngwakọ dị ọcha sine wave anyanwụ inverter. Ihuenyo aka ya na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịrụ ọrụ. O nwere ike dakọtara ruo 9 PC. Ike kachasị bụ 49.5KW. O nwere ụzọ ọrụ anọ. Karịsịa na ọnọdụ ọrụ "Solar + AC", ndị isi anyanwụ na ndị isi AC nwere ike ịchaji batrị ma mee ka ibu dị n'otu. Ọ bụ oke ojiji nke ike anyanwụ. Ntinye ikike nke anyanwụ karịrị 15% karịa ihe ntụgharị anyanwụ ndị ọzọ. Revo usoro nwere ike ịmalite ma rụọ ọrụ na-enweghị batrị, ma nwee ike ịrụ ọrụ na batrị lithium. Ngwaahịa a nwere asọmpi siri ike zuru ezu.
Ọ bụghị naanị na Sorotec nwere teknụzụ sayensị kachasị elu n'ọhịa. Ngwaahịa ndị nwere nnukwu ọla edo ọdịnaya. Na Sorotec dị njikere ịnakwere na ịmepụta ihe ọhụrụ. Ndị ahịa niile ekwenyewo na nke a.